Ururka NUSOJ oo si adag u cambaareeyey weerarka xarumaha Daljir loo geystey – Radio Daljir
Seteembar 15, 2019 6:46 g 1
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa cambaareeyey talaabo ciidamo katirsan bilayska Puntland shalay ku weerareen xarunta Daljir ee Garoowe.
“Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed (NUSOJ) wuxuu si adag u cambaareynayaa falka rabshadaha leh ee ay qaadeen booliiska dawladda Puntland oo ka dhan ah hogaanka warbaahinta madaxa banaan ee Daljir xarunteeda Garoowe Sabtidii, 14-ka Sebtember.” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka NUSOJ.
Maamulaha Idaacadda, Axmed Sheekh Maxamed (Tallman) ayaa tallaabada ku sifeeyay mid cabsi gelin ah si loo aamusiyo idaacadda isla markaana loo xakameeyo runta ka dib markii labaahiyey xad-gudubyada xuquuqda aadanaha ka dhanka ah ee ka dhaca Puntland.
Weerarkan ayaa yimid ka dib markii Radio Daljir toddobaadkan baahisey waraysiyo iyo warbixinno sheegaya eedaysanayaal jeelasha Puntland lagu jirdiley oo qaarkood u dhinteen.
“NUSOJ waxay cambaaraynaysaa Adeegsiga Awood Xad dhaaf ah iyo weeraro aan macquul ahayn oo sharci daro ah.” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka NUSOJ.
Cumar Faaruuq Cismaan xoghayaha guud ee NUSOJ ayaa yiri “Waxaan ka codsaneynaa maamulka Puntland inay joojiyaan falalka naxariis darada ah ee caburinaya saxaafada xorta ah.”
Ugu dambeyntii, NUSOJ waxay ugu baaqeysaa mas’uuliyiinta Puntland inay ixtiraamaan xuquuqda suxufiyiinta ayna u oggolaadaan inay ka warbixiyaan arrimaha danaha guud, oo ay ka mid tahay baarista khaladaadka saraakiisha dowladda cabsi la’aan.
Hoos riix War Saxaafadeedka NUSOJ oo ku soo baxay afka Ingiriiska
OGAYSIIS: Tartanka Orodka 5ta kilomitir ,Puntland
MARAYKANKU WAXAY DHAHAAN:ROLLEN REGEN BAA U DOQONSANAA MADAXWEYNAYAASHA MARAYKAN SOO MARAY ANA WAXAAN LEEYAHAY DENI WAA KII U DOQONSANAA MADAXDII PL SOO MADHAY!!!.